မယ့်ကိုး: နာကျင်မှုနှင့် နားလည်ခြင်း
မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်ခိုက်မှာ ဝမ်းကွဲညီမငယ်တစ်ယောက်က ကျွန်မနဲ့အတူ ခဏလာနေပေးပါတယ်။ ထိုညီမလေးမှာ မျက်နှာချိုသူဖြစ်ပြီး စကားတစ်ခွန်းပြောတိုင်း အမြဲလိုရယ်သံနဲ့ အဆုံးသတ်လေရဲ့။ ဥပမာဆိုရမယ်ဆို ရုပ်မြင်သံကြားက ကြော်ငြာကြည့်နေရင်း သူမက ‘မင်းသမီးရဲ့ လက်မောင်းက အကြီးကြီး ဟဲဟဲ’လို့ ပြောကာ ရယ်လေတာ။ ကျွန်မက ‘လှောင်တာလား’ လို့မေးလျှင်တော့ ‘မဟုတ်ပါဘူး အစ်မကလည်း ဟဲဟဲ’ လို့ ငြင်းဆန်ပြီး ရယ်ပြန်ရဲ့။
ကျွန်မကိုယ်တိုင် အရယ်သန်သူဖြစ်ပေမယ့် သူမရဲ့အမြဲတစေရယ်မောမှုနှင့်တော့ နေရတာ အချိုးမကျပါချေ။ ရည်းစားရှိလို့ ဒီလိုပျော်နေတာလားလို့ မေးလျှင် ‘မရှိပါဘူး အစ်မရဲ့ ဟဲဟဲ’လို့ ရယ်ပြောပြန်တာ။ ဘွဲ့ရပေမယ့် အလုပ်မရသေးသော အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်အရွယ်သူမက ဘာလို့ပျော်နေတာလဲလို့ စဉ်းစားမရနိုင်အောင် ရှိလေပြီ။ လိုချင်တောင့်တ သိပ်မရှိသူ၊ လောဘမကြီးသူလို့ လူတစ်ချို့က သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော ကျွန်မပင် သူမရဲ့ပေါ့ပါးသောစိတ်ဓာတ်ကို တအံ့တသြ အားကျမိပေမယ့် အဒေါ်က သူမကို ဘယ်လိုများ ပျိုးထောင်ခဲ့ပါလိမ့်ဟု ချီးကျူးချင်လျှက် မုန်းတီးပြန်ရဲ့။
ထိုအဒေါ်မှာ ငယ်စဉ်အခါတုန်းက ကလေးလေးကျွန်မကို ပေါက်လွှတ်ပဲစားလိုသဘောထားကာ မျက်နှာလွှဲခဲပစ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူ။ ထိုလက်လွတ်စပယ်ပစ်ခဲ့သော ခဲမှာ ကြီးမားလွန်းတာလို့ ကျွန်မရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမှာ ယိုင်ထွက်သွားပြီး ယနေ့ထက်တိုင် နာကျင်နေဆဲရယ်။ သူမက မျက်နှာကြည်စင်ကာ လောကကြီးကို အရောင်မဲ့ကြည့်နေစဉ်မှာ ကျွန်မကတော့ သံသယကြီးကြီးနှင့် အခဲမကြေဖြစ်နေတုန်းရယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ခွှင့်မလွှတ်နိုင်သလို ကလဲ့စားလည်း မချေနိုင်ဘဲ ရင်ထဲမှာသာ အခုအခံကို ထုထည်ပြည့် တည်ဆောက်ဖြစ်နေဆဲ။ မတရားတဲ့လောကကြီးပဲ။ သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းမစာတဲ့အဒေါ်လို့ မျက်နှာ စူပုပ်ပုပ်နဲ့ကျွန်မ ဒေါသကြီးနေစဉ်မှာ သူမကတော့ သီချင်းတအေးအေးနှင့် ချိုအေးပြုံးရွှင်ရှိလှလေတာ။
ထိုသို့မြင်ရတိုင်းမှာ ကျွန်မ မရရှိခဲ့သော ပျော်ရွှင်မှုအတွက် အဒေါ်ကို အမျက်ထားစိတ်မှာ အရှိန်ပြင်းလာပြန်သလို မထွေးနိုင်မအန်နိုင် မုန်းလွန်းလှပေမယ့် ကျိန်ဆဲဖို့ပင် မစိတ်ကူးဝံ့တဲ့ လူယဉ်ကျေးမဟုတ်ပါလား။ သက်ပြင်းကိုသာ နာနာချရင်း ဖြေသာအောင် စာအုပ်များကိုပဲ မဲဖတ်နေကာ ကံအားလျှော်စွာပဲ ဂျူးစာရေးဆရာ Chaim Patok ရဲ့ ‘The Chosen’ ဆိုသော စာအုပ်ကို ဖတ်မိခဲ့ပါတယ်။
‘How will I teach this mind to understand pain? How will I teach it to want to take on another person’s pain? P-276
ဂျူးတရားပြဆရာအဖေဟာ ဥာဏ်ရည်ထက်မြတ်တဲ့သူ့သားက ပညာသာထူးချွန်ပြီး စာနာစိတ်မရှိသူဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်ကာ တရားစာပြချိန်မှလွဲလို့ သူ့သားကို စကားမပြောဘဲ ‘နှုတ်ဆိတ်သောနည်း’ကို ကျင့်သုံးပြီး သားကိုပျိုးထောင်းခဲ့ပါတယ်။
‘He was bewildered and hurt. The nightmares he began to have… But he learned to find answers for himself. He suffered and learned to listen to the suffering of others. In the silence between us,he began to hear the world crying’ p-277
သားဖြစ်သူမှာ စိတ်ရှုပ်ထွေးနာကျင်ခဲ့ရတယ်။ အိပ်မက်ဆိုးတွေ စတင်မက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်အဖြေကို ရှာဖွေရမှာဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ သူထိခိုက်ခံစားရပြီးနောက် တခြားသူများရဲ့ ဒုက္ခကိုလည်း နားထောင်ဖို့ နားလည်ခဲ့တယ်။ သူတို့သားအဖနှစ်ယောက်ကြားက တိတ်ဆိတ်မှုမှာ သားဖြစ်သူဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ငိုကြွေးသံကို စတင်ကြားလာရတယ်။
ကျွန်မအတွက်တော့ ကျေးဇူးကြီးလှတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကြောင့် အစ္စရေးနိုင်ငံကို စတင်တည်ထောင်ခြင်းအကြောင်း၊ ဂျူးလူမျိုးစုများရဲ့ အမူအကျင့်အပြင် တိတ်ဆိတ်နာကျင်ခြင်းရဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပါ သင်ကြားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ရန်လိုစိတ်မှာ သိသိသာသာလျော့ကျ သွားလေတာ။ ကျွန်မသာ အနာကျင်ကင်းကင်းဖြင့် ကြီးပြင်းခဲ့ရမယ်ဆို တခြားသူတွေရဲ့ နာကျင်မှုကို နားမလည်နိုင်သူ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မှာ။ ထောင်လွှားမောက်မာသူ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်း တပ်အပ်မဆိုနိုင်။ သတ္တဝါတွေရဲ့ ပင်ကိုသဘောအရ ကိုယ်တိုင်ထိမှနာ၊ နာကျင်မှလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူကို အပြည့်အဝကိုယ်ချင်းစာနိုင်တာ မဟုတ်ပါလား။
ကျွန်မသာ မနာကျင်ခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါလျှင် အားလုံးကို စာနာစိတ်ကင်းကင်းနဲ့ လောကကြီးက မျှတတယ်လို့ အခုချိန်မှာ ဆိုဖြစ်လိမ့်မလား။ ကံကောင်းခဲ့သူ မဖြစ်လိုတော့ပါ။ ဒဏ်ရာကင်းပြီး အရာ အားလုံးကို အလေးအနက်မထားဘဲ ပေါ့ပါးလွင့်မျောနေသူတစ်ယောက် မဖြစ်ချင်ပါ။ သစ္စာစကားရယ်လေ။ ဒဏ်ရာများကို ရင်ဝယ်ပိုက်သည်းခံရင်း တခြားသူများရဲ့ နာကျင်မှုတွေကို ကြားနာနိုင်စွမ်းရှိသူ၊ ခံစား နားလည်ပေးတတ်သူ၊ ဖေးမမျှဝေယူမယ့်သူသာ ဖြစ်လိုလှပါတယ်။ ။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 7/02/2013 12:05:00 PM
ထိခိုက်နာကျင် မှု နဲ့ နားလည်ပေး နိုင်မှုက တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေ နိုင်တာပေါ့နော်...။ ဒီတော့ အားလုံးက၊ အားလုံးကို နာလည်ပေး နိုင်ဖို့ ဆိုတာတော့ ခက်မယ်နော်...။
တခါတခါ စိတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်သူက ခံစားရသက်သာသလားလို့နော် မမ။ ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တွေ့ခံစားဘူးရင် ကိုယ်ချင်းစာပေးနိုင်တယ်နော်မမ
5/7/13 4:56 PM